बिजुली–बत्ती,कुलमानबिना बल्दैन कत्ति ? - Pradesh Today बिजुली–बत्ती,कुलमानबिना बल्दैन कत्ति ? - Pradesh Today
बिजुली–बत्ती,कुलमानबिना बल्दैन कत्ति ?
नेपाल विद्युत प्राविधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान घिसिङको पदावधि सकिरहदा र उनी पदमुक्त भइरहदा देशमा अठार–अठार घण्टा विद्युत लोडसेडिङ खेपेका जनता थप त्रसित छन्, ग्रसित छन् ।
आज भर्खरैका समयमा क्षण–क्षणमा बिजुलीले बत्तीले सामान्य जनतालाई तर्साउने शैली पनि अपनाएको छ । पटक–पटक साँझको बत्ती बाल्ने समयमा र बिहानको घाँम झुल्के समयमा बिजुली बत्ती जुनकिरीको पुच्छरजस्तै गरी बल्दछ ।
अर्थात् आधा घण्टाको समयमा बिजुली बत्ती लगभग पाँच पटक बल्ने र निभ्ने गर्दछ । हुन त विद्युतमा यस्तो समस्या पटक–पटक सामान्य रूपमा भइरहने प्राविधिक समस्या होलान् तर ती सबैकुरा हामीजस्ता सर्वसाधारण उपभोक्तालाई के थाहा ? कुन बेला यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ र कुन बेला बत्ती निभ्छ ?
हामी त जान्ने के हो भने यदि बिजुली बत्ती समानरूपले अविछिन्न बलिरहेन भने त्यो ढिलो वा चाँडो विद्युत लोडसेडिङको रोग हो । किन भने कुनै पनि रोग शुरूमा नै झ्याप्प भेटिहाल्ने, समातिहाल्ने र अराठ–कराठ पारी हाल्ने त पक्कै पनि होइन ।
पहिले–पहिले यसका लक्षणहरू विस्तारै–विस्तारै देखिदै जान्छ र त्यसले उग्ररूप लिएपछि रोग–रोगकै रूपमा देखापर्न थाल्दछ र अन्तिममा थलासमेत पार्दछ । त्यसैले यो विद्युत कटौती हुने र विद्युत लोडसेडिङ हुने सामान्य लक्षण शुरू भएको त होइन ?
नत्र भने सधैंका सधै ठिक त्यही बेला, ठिक त्यहि समयमा किन यसो हुन्छ ? प्राविधिक समस्य छ भने त त्यो अक्कल–झुक्कल हुने समस्या हो ।
न कि दिनहुँ उही बेला, उही समय र उत्तिकै समय यो के हो ? विद्युत प्राविधिकरण जनतालाई के ठान्दछन् ? विद्युत प्राविधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? कतै विद्युत प्राविधिकरणले मैनबत्तीको काम सञ्चालन गर्दै त छैन ? कतै विद्युत प्राविधिकरणले मट्टीतेलको खानी त उत्पादन गर्न लागेको छैन ? कतै विद्युत प्राविधिकरणले सौर्य उर्जाको व्यापार त गर्दैछैन ?
कतै विद्युत प्राविधिकरणले इन्भर्टरको डिलरसीप त लिएको छैन ? कतै विद्युत प्राविधिकरणले वैकल्पिक उज्यालोको खोज, तलास, उत्पादन र वितरणको ठेक्का त लिएको छैन ? जनताको मन किन यसरी त्रसिएको होला ?
एकैक्षण बिजुली बत्ती दिउँसै झिपिक्क निम्दा पनि किन अठार घण्टा लोडसेडिङको सपना दिउँसै देखिन्छ होला ? यसमा विद्युत प्राविधिकरणको दोष होला नहोला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर कुलमान घिसिङको अनुपस्थितिमा बिजुलीमा देखिने त्रुटी, समस्या, गल्ती, कमजोर, बाधा, अवरोध, रोकवट सबै हुँदा लोडसेडिङ नै सम्झिने हाम्रो गल्ती पक्कै छ ।
देशमा बिजुली बत्ती बल्नु, यो देश उज्यालो हुने, यो देशका जनताले उज्यालो पाउनु कुनै अन्याय, अन्यथा र अचम्म होइन । यो व्यक्तिवादी जश पनि होइन । गर्न सक्नेको जसको पनि प्रशंसा हुन्छ । यो गरेर देखाउने बेला हो ।
अरूले पनि यो भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने सबै काम कुलमान घिसिङले गरिसके भन्ने पनि होइन । त्यहाँ थुप्रै र प्रशस्तै अधूरा काम होलान तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जनताका घर दैलोमा साँझको समयमा बत्ती बाल्नु र बत्ती बालिदिनु नेपालका लागि ठूलै चुनौती थियो ।
मन त पटक्कै मान्दै मान्दैन, जब बत्ती बालेर उज्यालो पार्ने समयमा बिजुली बत्ती झ्याप्प–झ्याप्प गर्न थाल्दछ तब लोडसेडिङको आकृति देख्न थालिन्छ र भनिन्छ– ‘के बिजुली बत्ती कुलमान विना बल्दैन कत्ति ? यदि यसो होइन भने जनता तर्साउने काम विद्युत प्राविधिकरणले कहिले रोक्छ ? यो प्राविधिकरण समस्या वा गैर प्राविधिकरण समस्यालाई हटाउँछ कहिले ?
हिजो लाखौं लाख जनताको भिडले कुलमानलाई यथास्थिति पुनर्नियुक्ति गर भन्दा कसैका लागि देवत्वकरण भयो । कसैका लागि व्यक्तिगत जश भयो । कसैका लागि व्यक्तिगत माया र चाहना भयो । कसैका लागि महत्वकांक्षी भयो । कसैका लागि दायाँ, बायाँ नहेरेको भयो ।
कसैका लागि आफ्नो र पराई चिन्न नसकेको भयो । कसैका लागि लोकप्रियता जगाउने स्रोत भयो । कसैका लागि ठूलै डर र त्रास भयो । किनभने एउटा विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखलाई चार वर्षको कार्यकाल दिदा आधा जनता सडकमा आउँछन् भने फेरी चार वर्ष दिदा त सम्पूर्ण जनता नै कुलमानतिर खनिन्छन्, पोखिन्छन् र घोप्टिन्छन् ।
यस्तो बेलामा विद्युत प्राविधिकरण मात्र नभएर देशै खान पनि के बेर ? भन्ने पनि लाग्यो होला र लाग्नु पनि स्वभाविक नै हो । किनभने जनताले रोज्ने, जनताले खोज्ने, जनताले चाहने, जनताले चिन्ने, जनताले जान्ने, जनताले मान्ने र जनताले छान्ने भनेकै नै जनभावना बुझेको जनप्रेमी र जनसेवीलाई नै हो ।
जनताको नजरमा कुलमानको व्यक्तिगत शारीरिक संरचना र उनको पारिवारिक पृृष्ठभूमि होइन । उनले आफ्नो पेश, पद, कुर्सी र जिम्मेवारीमा रहदा, बस्दा र छदाको समयले उनको काम, कर्तत्व, जिम्मेवारी र दायित्वको अक्षरस पालना भयो त्यो नै जनताको उनीप्रतिको झुकाव, लगाव र माया हो ।
यदि आज कोही कसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आएर हिंजोको भन्दा एक से एक जनप्रेमी र जनसेवीका काम विद्युत प्रवाह र विद्युत सुचारद्वारा प्रकट गर्दछ भने नेपाली जनताले कुलमानलाई बिर्सेर फेरो आजकैलाई वाह ! वाह ! गर्नेछन् र ताली बजाउनेछन् ।
जनताले कहिल्यै राजनीति गर्दैनन् र जनताले कहिल्यै राजनीति लिपपोत र जलप लगाउन जान्दैनन् । चाहे जोसुकै दल, मोर्चा, पार्टी, संगठन तथा व्यक्तिको पछि लाग्ने होस् त्यो जनतालाई चिन्दा र चासोको विषय हुँदैन ?
जनताले केवल आफूले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा, अधिकार र प्रयोग सुनिश्चित खोज्छन र माग्छन् । जनताको आवाज वा आवाज जसले मिसाउन सक्यो उसैको देवत्वकरण हुन्छ, त्यसमा दुईमत नै छैन । पौराणिक कालमा देवीदेवता पनि सबै मानवरूपी र मानव प्रतिमूर्ति नै हुन् ।
एउटा मानव उसका धर्म र कर्मका आधारमा ऊ देवता बन्न पनि सक्छ र अधर्म र कुकर्मका आधारमा दानव पनि बन्न सक्छ ? दानव र मानव स्वयम् व्यक्तिमा निहीत हुने कुरा हो ।
मानव–मानव देवत्वकरण हुन नसक्ने दृष्टान्त कही पनि उल्लेख छैन र मानव–मानव दानवमा पृष्टि हुन नसक्ने ग्यारेन्टी कुनै नीति शास्त्रमा उदृत गरिएको छैन ।
सबै कुरा व्यक्तिले धारण गर्ने सोंच, विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यता, भावना, कर्म, मर्म, चिन्तन, मनन्, बोली–चाली, बानी, व्यवहार, आचरण, चरित्र, स्वभाव आदिमा भरपर्ने कुरा हुन् । राम्रो नराम्रो रूप, समानता, कुलघराना, खानदानीमा पृष्टि हुने र परिभाषित हुने कुरा होइन ।
तसर्थ भावनामा बगेर, उत्तेजनामा आएर, सीमित घेरामा बाँधिएर कसैको प्रशंसालाई देवत्वकरणको संज्ञा दिनु काम गर्न नसक्नेका लागि तीलको पहाड हो । जसले कर्म गर्छ उसले फल पाउाछ । जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ, यो सामान्य नियम र सिद्धान्त हो । काम गर्नेले जश पाउँछ, र जश पाउनेले माया, स्नेह, समर्थन र प्रशंसा पनि पाउँछ ।
यसमा अचम्म मान्नु पर्दैन र छक्क पनि पर्नु पर्दैन । कुलमानलाई जश जाँदा सरकारलाई किन नजाने ? कुलमानलाई जश जाँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन नजाने भन्ने प्रश्न उठ्ला र प्रश्न आउँला । त्यसका लागि के बुझ्न जरूरी छ भने यो देशमा दिनमा अठार–अठार घण्टा विद्युत काटिदा र लोडसेडिङ हुँदा त्यतिबेला उर्जामन्त्री थिएकी थिएनन् ।
त्यतिबेला सरकार थियो कि थिएन ? त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिएकी थिएनन् । जतिबेला यो देश र यहाँका जनताले सदासर्वदा अँध्यारो झेले र अँध्यारो खाए पचाए त्यतिबेला देशमा सरकार पनि थियो ।
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पनि थिए तर केवल कुलमान घिसिङ मात्र थिएनन् । जब नेपालको विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा निकायकारी निर्देशकमा आसिन भए तब देश अँध्यारो युगबाट विस्तारै–विस्तारै उज्यालो युगतिर लाग्यो र अन्ततः देशमा लोडसेडिङको अन्त्य हुन पुग्यो । सत्य र यथार्थ कुरा त सबैले देख्न, बुझ्न, जान्न, मान्न, बोल्न र बयान गर्न सक्नुप¥यो नि!
सरकारलाई जश नजाने, उर्जामन्त्रीलाई जश नजाने, विद्युत प्राधिकरणलाई जश नजाने र सम्बन्धित कार्यालयका सम्पूर्ण टीम र कर्मचारीलाई जश नजाने भन्ने कुरा पटक्कै होईन ।
तर कुरा के भने त्यही पद, त्यही कुर्सी, त्यही कार्यालय, त्यही कर्मचारी, त्यही टीममा अन्य कुनै व्यक्ति कार्यकारी निर्देश हुँदा, बन्दा र बस्दा देश लालटिन युगमा जाने र त्यही यथास्थितिमा कुलमान आउँदा बिजुली बालटीन युगमा आउने ।
यो व्यक्तिगत चमत्कार हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत चातुर्यता हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत कार्यकुशलता हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत दृढ इच्छाशक्ति हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत इमान्दारिता हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत जवाफदेहिता हो कि होइन ?
यो व्यक्तिगत लगनशीलता हो कि होइन ? यो व्यक्तिगत दुरदर्शीता हो कि होइन एउटा सिंगो व्यक्तिले चाह्यो भने गर्न नसक्ने कुरा के छ ? व्यक्तिले नै हो परिवार हाँक्ने, व्यक्तिले नै हो संसार हाँक्ने एउटा सियो व्यक्तिले नै हो एउटा सिंगो ब्रह्माण्ड हाँक्ने ।
तसर्थ व्यक्तिवादी कुरालाई, व्यक्तिवादी चर्चलाई र व्यक्तिवादी प्रशंसालाई अन्यथा र अन्याय मान्नुपर्ने कुनै लाज, सरम, पछुतो छैन । यदि कुनै ब्यक्ति प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भने त्यसपछिका सबै व्यक्ति विशेषले त्यही प्रेरणाका साथमा काम गर्न सिक्नु र लाग्नुपर्दछ ।
देशमा बिजुली बत्ती बल्नु, यो देश उज्यालो हुने, यो देशका जनताले उज्यालो पाउनु कुनै अन्याय, अन्यथा र अचम्म होइन । यो व्यक्तिवादी जश पनि होइन । गर्न सक्नेको जसको पनि प्रशंसा हुन्छ । यो गरेर देखाउने बेला हो । अरूले पनि यो भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने सबै काम कुलमान घिसिङले गरिसके भन्ने पनि होइन । त्यहाँ थुप्रै र प्रशस्तै अधूरा काम होलान तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जनताका घर दैलोमा साँझको समयमा बत्ती बाल्नु र बत्ती बालिदिनु नेपालका लागि ठूलै चुनौती थियो ।
ठूलै संघर्ष थियो र फलामका चिउरा चपाए सरह नै थियो । त्यो काम कुलमानले गरेका हुन् । बाँकी काम कैयौँ छन् । अबका कुलमानले गरेर देखाउँदा हुन्छ । काम गर्नेका लागि एकपछि अर्को लोकप्रिय र जनसेवी काम हुन्छन् । केवल बोल्ने काम गर्ने बढी बानी हुनुप¥यो ।
अहिले पनि विद्युतभित्र कैयौँ विकृति र विसंगति होलान् । जनतालाई पैसा तिर्न जाँदा कठीन छ । मीटर रिडिङको कार्यक्रम नियमित छैन । सर्वसाधारण जनतासँग लिने शुल्क वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित छैन । उज्यालोका लागि कि उर्जाको लागि छुट्याउने प्रणाली छैन ।
न्यूनतम शुल्कको नियमित स्थिर मूल्य छैन । बत्ती नै नबालेर पैसा तिर्नुपर्ने अवैज्ञानिक चार्ज यथावत छ । यो र यस्तै थुप्रै कुरा छन् र जसलाई अबको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नैपर्छ । बिजुलीको विवरण प्रणाली एक आधारभूत र तल्लोस्तरको प्रणाली हो ।
यो जसरी पनि हुनुपर्दछ । विद्युत प्राधिकरणको शुन्यदेखि काम सुरू हुने गर्दछ भने त्यो शुन्यमा बिजुली बत्तीको प्रसारण र प्रवाह पर्दछ । यसपछि मात्र अन्य कुराहरू एक÷दुई हुँदै क्रमैसँग माथि बढ्दै जान्छन् ।
जिरो डिग्रीको काम गर्नपनि विद्युत प्राधिकरणलाई अनेक–अनेक बहाना चाहिएको छ । राम्रो मान्छे चाहिएको छ, हाम्रो मान्छे चाहिएको छ । यो अति सामान्य काम जोसुकैले पनि गर्न सक्नुपर्ने होइन र यस्तो सामान्य, सरल र आधारभूत काम गर्नको लागि पनि हामीलाई कुलमान नै चाहिने र त्यस्तै व्यक्ति चाहिने कस्तो विडम्बना ?
नेपालका जलस्रोतमा उत्पादन भएको बिजुली भण्डारण, व्यवस्थापन गरेर समानुपातिक हिसावले विद्युतको आपूर्ति गर्नु गराउनु कुनै आकाश जस्तै हो ? कुनै धर्ती उचाल्नु जस्तै हो ? यदि हिजोकै दिनदेखि जो कोहीले पनि ये काम सम्पन्न गरेको भए आज कुनै व्यक्ति जनताको नजरमा टाढा र नजिक बन्नुपथ्र्यो ? त्यो त काम गर्ने ब्यक्तिले नै सिर्जना गरेको वातावरण होइन र ?
अस्ती बत्ती बलेन, हिजो बत्ती बल्यो । आज झिलमिल–झिलमिल गर्दछ कतै भोलि निभेको निभै हुने त होइन ? यो सामान्य जनताको सामान्य जिज्ञासा मात्र हो । यसलाई अन्त्य गर्ने भनेमा एक प्रकारको निरासालाई आशामा बदलिने आजभोलिको नेतृत्वले हो । विगत भनेको भूत हो ।
भूतदेखि जो पनि तर्सन्छ र भाग्छ । तसर्थ विगतको जस्तो अँध्यारो भूतले जनतालाई तर्साउने, झस्काउने र भत्काउने नगरोस् । यो विगतरूपी भूत फेरी नदोहोरियोस् र अँध्यारो रातलाई उज्यालो पार्दै सबै भूतलाई उल्टै तर्साएर भगाउन सकियोस् यहि इच्छा, चाहना र कामना जनतामा जागेको हो । जनताले व्यक्ति खोजेको होइन ।
बिजुलीको उज्यालो खोजेको हो । बिजुलीको उज्यालो खोजेका जनतालाई साँझ–विहानको समयमा सुचारू र नियमित उज्योलो दिएर थप उत्साहित बनाउनु होस् र जनताको मुख बन्द गर्नुहोस् ।
तर साँझ–बिहानको समयमा बिजुली बत्ती झ्याप्प–झ्याप्प पारेर उल्टै जनताको मुख दुख्ने गरी कराउने, कुर्लने, चिच्याउने, बक्ने, बोल्ने र कुलमानलाई देखिरहने नबनाउनुहोस् । विद्युत प्राधिकरणले सामान्य कुरो बुझोस कि, ‘बत्ती अँध्यारोको साथी हो र साँझपर्ने बित्तिकै बत्ती बाल्नुपर्दछ ।’
लेनदेनको मुद्दामा फरार पक्राउ